म भुइँभन्दा तल खाडलबाट उठेको मान्छे हुँ : प्रकाश सपुत
२०७७ भदौ २९ सोमबार १६:१२:००
‘बोलमाया’देखि ‘बदला बरी लै...’ सम्म आइपुग्दा उनले मानिसको संवेदनामा केन्द्रित भई काम गरेका छन् । उनका गीत रुचाइएका पनि छन् । भिडियो पनि रुचाइएका छन् । प्रायः युट्युब ट्रेन्डिङमै आइरहेका हुन्छन् । भिडियोमार्फत गीतसँगै कथा पनि भन्नु उनको विशेषतै बनेको छ ।
देशभित्रैको सिमानासँग कहिलेसम्म लडिरहने ?
केही समयअघि सार्वजनिक भएको सपुतको गीत ‘बदला बरी लै...’ चर्चामा आयो । साथै आलोचना पनि भयो, बलात्कारीलाई सजायका लागि भूतको सहारा लिइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पनि आए, ‘अपराधीलाई सजायका लागि त्यसरी भूतको सहारा लिने ? कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने संकेत दिँदा के जान्थ्यो ?’ सपूतले यस्ता प्रतिक्रिया पढे । उनलाई सोच्न बाध्य पनि गरायो । उनी स्वयं पूर्ण आस्तिक नरहेको बताउँछन् । तर, कानुन ल्याउँदै गर्दा हामीले देखिरहेको कानुनको नांगो अनुहारप्रतिको वितृष्णाका कारण पनि आफूले सामाजिक विश्वास पद्धतिको सहारा लिएको बताउँछन् सपूत । हाम्रो कानुन न्याय दिनभन्दा बढी प्रमाण नष्ट गर्न उद्यत् देखिनु र कानुनप्रतिको अविश्वासका कारण आफूले मान्यताहरूको सहयोग लिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो राज्य–व्यवस्थामाथि मैले व्यंग्य गर्न खोजेको हुँ,’ सपूत भन्छन् ।
#प्रकाश सपुत # बोलमाया # बदला बरी लै
गायक प्रकाश सपुतद्वारा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दुई लाख सहयोग गर्ने घोषणा
लोकदोहोरी प्रतियोगिताले डिप्रेसनमा पुर्‍यायो
प्रकाश सपुतसँग काम गर्न सहज : निशान बानियाँ
गलबन्दी विवादमा सम्झौता : प्रकाश सपुत भन्छन् ‘तत्कालको समाधान मात्र’
एकको नजरमा अर्को : अञ्जली अधिकारी र प्रकाश सपुत
बोलमायाकै कथा हो गलबन्दी : प्रकाश सपुत